Home Wararka Farmaajo oo kaligii dib uga noqday go’aankii uu xiriirka ugu jaray Kenya!...
Farmaajo oo kaligii dib uga noqday go’aankii uu xiriirka ugu jaray Kenya! Maxaa ku qasbay?
Farmaajo oo rajo ka qabo in uu dib xiriir ula furo Uhuru Kenyatta ayaa isaga kaligii ka noqday go’aankii uu dhowr bilood ka hor uu kaligiis qaatay kaas oo uu xiriirka ugu jaray dalka Kenya. Dowlada Kenya oo ah dowlad saameyn ku leh siyaasadda caalamka iyo tan gobolka ayaan marnaba jawaab ka bixin go’aankii uu xiligaas xiriir dublamaasiyeed ugu jaray dalka Kenya.
Sida lagu yaqaano dhaqanka siyaasada calamiga, marka dowlad xiriir u jarto dowlad kale, dowlada xiririka loo jaray ayaa iyada ka jawaabto oo xirirka jarta, laakiin dowlada Kenya arintaas ma samaynin, waana ay ka amuustay go’aanka qar iska tuurka ah ee uu qaatay Farmaajo. Waxa ay diidanayd in uu Farmaajo marmarsiyo ka dhigto dalka Kenya.
Dowlada Qatar oo wakiil uga ahayd dalka Soomaaliya arimaha Kenya, kadib marka xiirka Kenya loo jaray, ayaa la sheegayaa inay arintaan qayb ka ahayd. Farmaajo ayaa u muuqda in uu meelkastaa iyo ficil kastaa u qaadayo sidiii uu kurigsa ugu nagaan lahaa, hadii xataa ay taa keenayso in uu iibsado masiirka umadda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Su’aashu waxa ay tahay maxay samayn doonaan kooxihii uu Farmaajo u isticmalay in ay caayaan ama dagaal ku qaadaan dalka Kenya? Waxa muuqata in uu meel cidka la ah kaga dhaqaaqay? Dacwadii badda halkeey ku danbeeyn doontaa? Waaa lama huraan ah in shacabka Soomaaliyeed arintaan ku baraarugaan!